Manahirana, kanefa… | NewsMada
Mila tsy ho tapitra ny resabe etsy sy eroa, mikasika ilay tranga niseho tetsy Ampefiloha, taorian’ny nahasamboran’ny polisy ireo jiolahy nanao, na nikasa handroba fiara nitondra vola haterina any amin’ny banky. Ankoatra ireo afa-nandositra, samy lavon’ny polisy ireo jiolahy roa. Ny iray, tetsy Antsahamanitra, toerana nitrangan’ny fifampitifirana. Ny faharoa, tetsy Ampefiloha. Ny fomba namonoan’ny polisy ilay jiolahy tetsy Ampefiloha anefa no izao miteraka adihevitra be izao.
Manahirana! Izay, raha lazaina amin’ny teny fohy, ny fandehan’ny toe-draharaha ankehitriny. Hita soritra ny fifamalian’ny mpaneho hevitra maro ao anaty tambajotran-tserasera “facebook”. Ao ny tsy mankasitraka ny fihetsika nataon’ilay polisy nitifitra ka niafara tamin’ny fahafatesan’ilay jiolahy, na efa lavo tsy nahahetsika teo amin’ny tany aza. Fa tsy vitsy koa ireo nanome tsiny fa fihetsika tena mifanohitra amin’ny fanajana ny zon’olombelona sy ny hoe tany tan-dalàna ny nataon’ilay polisy, na inona na inona heloka nataon’ilay jiolahy. Dia eo… Tsy mety vita ny fifamaliana sy ny adihevitra.
Na ry zareo eo anivon’ny polisim-pirenena koa aza, tamin’ny alalan’ny fanambarana navoakan’ny foibem-pitantanana ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, nilaza ho sahirana raha niara-nahita tamin’ny besinimaro ilay horonantsary nampiseho ny zava-nitranga tetsy Ampefiloha iny.
Teo amin’ny ora farany anefa, nilatsaka ny vaovao, omaly hariva. Nandray ny andraikiny, araka ny fampanantenana nataony, ny Polisim-pirenena fa hanokatra fanadihadiana sy famotorana ahitana ny marina mikasika ity toe-draharaha iny. Nopotserina ny vay na maharary aza. Nentina teo anatrehan’ny fitsarana ny raharaha, ary naiditra vonjimaika am-ponja, omaly, ihany ilay polisy voakasiky ny toe-draharaha. Tsy vitan’izay fa mbola naneho ny fialan-tsiny ary nilaza fa miondrika am-panajana sy miara-ory amin’ny fianakavian’ny niharam-boina ny fianakaviamben’ny Polisim-pirenena.
Heverina, na mbola mety tsy hahafaly ny sasany ihany aza, fa fahasahiana lehibe izao fanapahan-kevitra noraisin’ny Polisim-pirenena, mikasika ity toe-draharaha ity, izao. Ny Polisim-pirenena izay nanamafy ny fanambiny amin’ny fanatanterahana ny iraka ankinina aminy, ary voafehin’ny lalàna velona. Efa tafiditra amin’ny firosoana ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny departemantan’ny Filaminam-bahoaka rahateo koa izao, araka ny fanamby apetrak’izy ireo. Lesona ho an’ny hafa iny raharaha nahabe resaka iny ka irariana ny tsy hiverenan’ny toa izany intsony. Sa ahoana?